XOG-Maxaa Sababay Iscasilaadda Gudoomiyihii iyo Afhayeenkii Golaha Iskaashiga & Xaaladda Baydhabo.
Puntlandnews.net (Baydhabo)-Madaxweynihii xilligiisu dhammaaday ee koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa banneeyey guud ahaan xilkii madaxnitinimada, wuxuuna ka tanaasuley musharaxnimada doorashada madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed oo bishaan dhici doonta.
Ilo ku sugan magaalada Baydhabo oo aanu xiriir la samaynay ayaa u xaqiijiyey Puntlandnews in tanaasulka madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan uu salka kuhayo talooyin uga yimid malaaqyada beelaha Digil iyo Mirifle ee gobolada Baay iyo Bakool iyo danaha shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida uu warbaahinta u sheegay Wasiirka Warfaafinta Maamulka Koonfur Galbeed Xasan Maxamed (Ugaas Xasan).
Gudoomiyaha barlamaanka maamulka koonfur Galbeed Soomaaliya Cabduqaadir Shariif Sheekhuna Maye ayaa la sheegay inuu xilka madaxtinimada maamulka koonfur Galbeed Soomaaliya si kumeel gaar ah u sii hayn doono.
Arrimo dhowr ah ayaa ku gadaaman tanaasulka madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan oo 10-kii sano ee ugu dambeeyey saamayn ku lahaa siyaasadda Soomaaliya, waxaana ugu muhiimsan cadaadiska kaga imaanayey dowlada federalka ah ee Soomaaliya iyo siyaasiyiinta kale ee u sharaxan xilka madaxtinimada maamulka koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dhinaca kalena, afhayeenkii golaha Iskaashiga maamul goboleedyada Cabdullaahi Shiikh Xasan ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkiisa Afhayeenimo.
Mudane Cabdullaahi Shiikh Xasan wasiirkii wasaaradda dastuurka maamulka koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa is casilaadiisa ku sababeeyey inay tahay maadaama uu is casilay Madaxweynihii Koonfur Galbeed Shariif Xasan Shiikh Aadan.
Puntlandnews.net waxay caada idiin soo gudbin doontaa macluumaad dheeraad ah oo salka kuhaya sababaha keenay iscasilaadda madaxweynihii maamulka koonfur Galbeed iyo tanaasulkii doorashada madaxtinimada & saamaynta uu kuyeelan karo golihii iskaashiga maamul goboleedyada.